The Selfies Space Best [hablahoodu] - Rule News
The Selfies Space Best [hablahoodu]
Sida ay hadda tahay maanta, qof kasta ayaa qaadi sawir a – xitaa aad ayeeyo. Oo qabow sida selfies aad ayeeyo waxaa laga yaabaa in, weligoodna ma kor leenahay inaan selfies meel qaaday by cir iyo gaar ahaan ma ku selfies Mars Rover ah.
selfies cir ayaa si gaar ah u Waxyoon maxaa yeelay, iyagu ma aha oo kaliya muujiyaan ballaadhkiisuna wuxuu ahaa sahaminta aadanaha, sidoo kale waxay muujiyeen in aan loo eegayn sida badan oo egghead ah aad tahay, qof kasta oo jecel selifes qaadashada. Xitaa ka badan in hal dhibic in, selfies Mars Rover ee jira tusaalooyin quruxda farsamo iyo farshaxan.
Haddii aad tahay qof ay heartstrings waxaa jiido mar kasta oo aad u daawadaan filimada sida Darbiga-E, maxaa yeelay, a selfies rover yar ka dhigi doonaa aad aaminsan tahay in John F. Kennedy ahaa in wax markii uu go'aansaday in aynu dayaxa tagaan.
← Jidka A meeldhexaadka ah in ay Qiimee Qalliin Maskaxda Bukaan- Raspberry Pi 3: Card yimaa-Credit ee PC 1.2GHz in Kharashka $35 →